calendar 2013 “Safari” Ny Kalandrie - Famolavolana
Ny Kalandrie Ny Safari dia alimanaka biby biby. Tsindrio fotsiny ireo ampahany, aforeto ary azo antoka hamita. Ataovy tahaka izao ny fihaonan'ny bibidia! Fiainana miaraka amina endrika: Ny endrika manara-penitra dia manam-pahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitra ny "Fiainana miaraka amina endrika".
Anaran'ny tetikasa : calendar 2013 “Safari”, Anaran'ny mpamorona : Katsumi Tamura, Anaran'ny mpanjifa : good morning inc..
Ny Kalandrie Katsumi Tamura calendar 2013 “Safari”